Baahin: Axad, Jun 12, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Warbixin: Marxallada siyaasadeed ee Somaliya & saamaynta Cahdiga Kampala ee M/weyne Shariif & afhayeen Shariif Xasan; “Maraakiibta shisheeye ee ku sugan xeebaha Somaliya waxay u joogaan dano iyaga u gaar ah” Wasiirka kallumaysiga ee Puntland; 21 xubnood oo ka mid ah odayaasha dhaqanka & indheergaradka gobolka Sool oo ugu baaqay Somaliland in ay ka baxdo gobolka Sool; Hawlgallada nadaafadeed & sare u qaadida biliceed ee caasimada Garowe oo mira dhalay; Duqa magaalada Garowe ayaan waraysanay. – Radio Daljir
Baahin: Axad, Jun 12, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Warbixin: Marxallada siyaasadeed ee Somaliya & saamaynta Cahdiga Kampala ee M/weyne Shariif & afhayeen Shariif Xasan; “Maraakiibta shisheeye ee ku sugan xeebaha Somaliya waxay u joogaan dano iyaga u gaar ah” Wasiirka kallumaysiga ee Puntland; 21 xubnood oo ka mid ah odayaasha dhaqanka & indheergaradka gobolka Sool oo ugu baaqay Somaliland in ay ka baxdo gobolka Sool; Hawlgallada nadaafadeed & sare u qaadida biliceed ee caasimada Garowe oo mira dhalay; Duqa magaalada Garowe ayaan waraysanay.